အဖိနှိပ်ခံတို့ အသံ: March 2013
စိတ်ဝင်စားစရာ မာမာရဲ့ ဝါသနာများ: ကြက်သား ဒံပေါက်: မာမာတို့ ကြက်သားဒံပေါက်ချက်စားကြပါတယ် ကိုယ့်ဘာသာကိုချက်တာ ဒါဟာပထမဆုံးပါ ချက်ရင်အဆင်မပြေမှာစိုးပြီး တစ်ခါမှချက်မစားပါဘူး ကျန်ခဲ့တဲ့အပါ...
Posted by Wai Lin Aung at 7:41 PM
Posted by Wai Lin Aung at 8:00 AM
Posted by Wai Lin Aung at 7:53 AM
Posted by Wai Lin Aung at 8:44 PM
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Kamarpale - Poem
မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: Kamarpale - Poem: ဝေဒနာ ... လောဂျစ် ကမာပုလဲ မတ်လ ၃၀၊ ၂၀၁၃ စာမတတ်ခဲ့ဘူး လက်ပန်တောင်းတောင်သူ ... ။ စာတတ်ခဲ့တယ် ရွှေလင်ပန်းနဲ့ အချင...
Posted by Wai Lin Aung at 8:25 PM
“ ရွှေမြန်မာတို့အတွက် ”
'ငါ' သာလျှင် တော် ၊ 'သူ' မတော် ဟု
လူတော် ထင်ပါ ၊ တို့မြန်မာကို
ဘယ်ခါ ဆယ်၍ ရမလဲ ၊၊
Posted by Wai Lin Aung at 7:27 PM
ဆူပူမှုတွေ တားဆီးနိုင်အောင် ရန်ကုန်တိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် ပါတီတွေနဲ့ ဆွေးနွေး
Posted by Wai Lin Aung at 1:16 AM
ဘာသာရေးအကြမ်းဖက်မှု ဒီမိုကရေစီ လုပ်ငန်းစဉ်များ ထိခိုက်နိုင်ကြောင်း အစိုးရ သတင်းထုတ်ပြန်
Posted by Wai Lin Aung at 12:08 AM
MAKE MONEY: စိုက်ပျိုး ရေး ၀န်ကြီး တနပ်စား မြင့်လှိုင် ၏ ဥပဒေမ...
MAKE MONEY: စိုက်ပျိုး ရေး ၀န်ကြီး တနပ်စား မြင့်လှိုင် ၏ ဥပဒေမ...: မြင့်ဇေယျာ ကုမ္မဏီ မြင့်ဇေယျာကုမ္မဏီ မျက်နှာစာ ဒဂုံအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ် သီးစားချ ထားသောလယ်များ ယခင် စစ်ပင် ကျေးရွာ မြင့်ဇေယျ...
Posted by Wai Lin Aung at 8:29 AM
ယခင် စစ်ပင် ကျေးရွာ
မြင့်ဇေယျာ စိုက်ပျိုးခြံအတွင်း စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းမရှိသည့် ပလပ်ထားသော လယ်ကွင်းများ
လယ်ယာနှင့် စိုက်ပျိုးရေး ၀န်ကြီးဦးမြင့်လှိုင်ပိုင်ဆိုင်သော မြင့်ဇေယျာ စိုက်ပျိုးရေးသည် ၂၀၀၈ခုနှစ်တွင် ထူးထရေးဒင်း ကုမ္မဏီ လီမီတက်(ဦးတေဇ) က ကန်ထရိုက် ဖမ်းမင်း( contract farming) စနစ် အသုံးပြုကာ စတင်သိမ်းယူခဲ့သော လယ်ကွင်းများဖြစ်သည်။ ကွင်းအမှတ် (၄၇၉)(၄၈၀) ဦးပိုင်အမှတ်(၁၁) ဖြစ်ပါသည်။ (ထူးထရေးဒင်းကုမ္မဏီလီမိတက်)ကဆောင်ရွက်သော ကန်ထရိုက်ဖမ်းမင်း အောင်မြင်မှုမရှိသောကြောင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ဦးတေဇ မှ ၀န်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင်ထံ သို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ လယ်ဧကပေါင်း(၅၆၀.၃၅) ဖြစ်ပါသည်။
သိမ်းယူခဲ့ပြီးနောက် လယ်သမားများသည် အသိမ်းခံရသော မိမိတို့ လယ်မြေများပေါ်တွင် စိုက်ပျိုးခအဖြစ် သီးစာခကို မိုးတွင်းကာလ အတွက် ခုနှစ်တင်း၊ နွေကာလအတွက် ၁၀ တင်း ဦးတေဇထံ ပေးကာ လယ်လုပ်ခဲ့ရလေသည်။
စတင်သိမ်းဆည်စဉ်က လယ်တဲပေါင်း(၄၄)တဲရှိပြီးလယ် သမားပေါင်း (၅၅)ဦး လုပ်ကိုင် စားသောက်နေသောလယ်ကွင်းများဖြစ်ပါသည်။
ယခုအချိန်ထိ အဆိုပါလယ်ကွင်းအတွင်းတွင် နေထိုင်လျက်ရှိသော လယ်သမားများမှာ ဦးကျော်ရှိန်၊ဦးဝင်းမြင့်၊ ဒေါ်ခင်ဝင်းကြည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။ အဆိုပါလယ်သမားများမှ လယ်သိမ်းသည့်ကိစ္စအားကျေနပ်မှုမရှိသောကြောင့် ယခု အချိန်ထိ ဖယ်ပေးခြင်း မရှိပဲ ဆက်လက်နေထိုင်သူများဖြစ်ကြပါသည်။
လယ်ကွင်းအတွင်း လူနေထိုင်ခြင်းမရှိသော တဲအလွတ် သုံးတဲ ရှိပါသည်။ လယ်တဲပိုင်ရှင်များမှာ ဦးမြထွေး၊ ဦးသန်းဆွေ၊ဦးမျိုးအောင်တို့ဖြစ်ပါသည်။
ထူးထရေးဒင်းကုမ္မဏီမှ မြင့်ဇေယျာသို့လွှဲပြောင်းပေးပြီးနောက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရသော တဲများမှာ ဦးကျော်ရွှေ၊ဦးဆန်းထွန်း၊ ဦးအုန်းသိန်း၊ ဦးသိန်းဝင်း၊ ဦးကြည်စိုးတို့၏ တဲများဖြစ်ကြပြီး ထိုတဲများကို ဖျက်ဆီး၍ ရထားလမ်းနံဘေးတွင် သွားရောက်ပုံထားကြလေသည်။ ထိုအချိန်က စစ်အစိုးရလက်ထက် ဖြစ်သောကြောင့်လယ်သမားများမှာ မည်သို့မျှ မပြောသာပဲ ခေါင်းငုံခံခဲ့ကြရပါသည်။
ယခုအခါ မြင့်ဇေယျာ ကုမ္မဏီလီမိတက်သည် လယ်သမားများနှင့်ထူးထရေဒင်း ကတိက၀တ်ပြုထားသော ကန်ထရိုက်ဖမ်းမင်းစနစ်ကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိပါ။ တစ်ခြား ကုမ္မဏီဖြစ်သည့် (International Sun Moon Star Agriculture Co.,Ltd.)ထံမှ သီးစားခ ရယူလျက် လယ်မြေကို လုပ်ကိုင်စေပါသည်။ တစ်နှစ်အတွက် သီးစားခမှာ တစ်ဧကအတွက် မိုး ၅၀၀၀၀ကျပ် ဖြစ်ပြီး နွေရာသီအတွက် ၅၀၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။ သီးစားချထားသော ဧက မှာ ၂၀၀ ဧကခန့်ရှိပါသည်။ ဧက ၁၀၀ ခန့်ကို ငါးကန်များ တူးဖော်ထားပြီး ကျန် ၂၀၀ ဧက ကို လယ်ယာလုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိပဲ ပလပ်ထားသဖြင့် နိုင်ငံတော် အတွက်၎င်း ၊ လယ်သမားများအတွက် ၄င်း မည်သို့မျှ အကျိုးမရှိနိုင်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
Labels: wai lin aung
မြန်မာနိုင်ငံနေ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များ လုံခြုံရေးအတွက် သမ္မတထံ တိုင်ကြား | ဧရာဝတီ
Posted by Wai Lin Aung at 6:29 PM
Armed Burmese Monks Threaten Journalists in Meikhtila
Posted by Wai Lin Aung at 11:43 PM
Posted by Wai Lin Aung at 8:03 PM
<blockquote class="twitter-tweet"><p>Cambodia Ups Minimum Wages for Workers: The new salary is substantially lower than that proposed by workers an... <a href="http://t.co/uKpbw7C8N3" title="http://bit.ly/Z4vPaa">bit.ly/Z4vPaa</a></p>&mdash; RadioFreeAsia (@RadioFreeAsia) <a href="https://twitter.com/RadioFreeAsia/status/314888104991391744">March 21, 2013</a></blockquote>
Posted by Wai Lin Aung at 5:36 PM
နိုင်ငံတော်အေးချမ်းဖို့ ဗမာတွေ အထိမနာဖို့ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာကို စားနေတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ အားလုံး ရဲ တာဝန်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
မွတ်ကုလားများ ခေါင်းမထောင် နိုင်အောင် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ ဆောင်ရွက်ရပါမယ်။ အစိုးရအဖွဲ့ ၀င်တွေကို ပြည်သူက အာဏာအပ်နှင်းထားတာ နိုင်ငံသားတွေကို စောင့်ရှောက်ဖို့ပါ၊ မိမိတို့ တာဝန်ကို မိမိတို့ သိပါ။ နိုင်ငံတော် က ပေးတဲ့ ပြည်သူဘဏ္ဍာကို စားနေသူများဖြစ်တယ် ဆိုတာသတိရပါ။ အထူးသဖြင့် ဗမာတွေ က ထမင်းကျွေးနေတယ်ဆို တာ အစဉ် သတိရပါ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကုလားလူမျိုးက အနည်းစုပါ ။ အစိုးရလူကြီးမင်းတို့ သိရမှာက ငါတို့ စားနေတာ ပြည်သူ့ထမင်းပါ၊ မြန်မာများရဲ့ ထမင်းပါလို့ သိကြပါ။ ပြည်သူအကျိုးကိုဆောင်ပါ။နိုင်ငံတော်အေးချမ်းဖို့ ဗမာတွေ အထိမနာဖို့ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာကို စားနေတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ အားလုံး ရဲ တာဝန်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
နိုင်ငံတော်အစိုးအရ မင်း အစိုးရဆိုပြီး.ပြည်သူက . ယုံကြည်မှု ထားပေးနေခဲ့ကြတယ်။ နိုင်ငံသားတွေအပေါ်
ပြည့်ဝသော လုံခြုံရေးမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်လဲ မပေးနိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်ပါ။
နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားများအား တရားမျှတစွာ တာဝန်ယူမကာကွယ်နိုင်ပါက. မိမိတို့ အစီအစဉ်ဖြင့် လုံခြုံရေးတာဝန်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပါတယ်။ ပြည်သူလူထု အားလုံးက ဒီမေးခွန်းကို သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေသိအောင် မေးမြန်ကြပါ။
ကိုယ့်ကိုမုန်းမှာကြောက်ပြီး လမ်းကြောင်းမှန်ရောက်အောင် တည့်မတ်မပေးနိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မူမျိုးနဲ့
မှားနေတာကို မှားနေပါတယ်လို့ မပြောရဲဘူးဆိုရင်ဒါဟာခေါင်းဆောင်မဟုတ်ပါဘူး။
အခုမှ သတင်းထုတ်ပြန်ဖို့ အတည်ပြုနေရတာနဲ့၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ အဖွဲ့ ဖွဲ့ နေရတာနဲ့၊ သေတဲ့သူလည်းသေပြီ၊လောင်တဲ့နေရာလည်းကုန်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည်မရှိတဲ့ လူ့အဖွဲ့ အစည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ် ၀န်ခံပြီး နုတ်ထွက် လိုက်ကြစမ်းပါ။ သမ္မတရုံးအဖွဲ့ နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ ၀င် အားလုံးကို ပြောချင်ပါတယ်၊ ရှက်ကြစမ်းပါ၊ အုပ်ချုပ်ရေး က ယိမ်းယိုင်နေတယ်၊စုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုက ချိနဲ့နေတယ်။ အဂတိလိုက်စားမှုက လွန်လွန်းနေတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့ လူ့ အဖွဲ့ အစည်း ဘယ်တော့ ဖြစ်လာမှာလဲ။ ကိုယ်အိမ်မှာ ကိုယ်နေပြီး ဧည့်သည်ဖြစ်သူက လာစော်ကားတာကို ခံနေရတဲ့ နိုင်ငံမှာ ဘယ်လိုမျက်နှာမျိုးနဲ့ နေ၀ံ့ တယ်ဆိုတာ သိစမ်းချင်တယ်။
ပြဿနာက ဖြစ်ပြီ အတော်ကို လွန်နေပါပြီ၊ စွမ်းဆောင်ရည်မရှိတဲ့ လူအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်လို့  ရုပ်ရှင်ထဲကလို သေပြီးမှ ရဲတွေရောက်လာပါပြီ။ဖတ်ကြည့်ကြပါတော့ ၊
အကြိမ်ကြိမ် ကြိုတင် သတိပေးထားခဲ့ ပါတယ်။ ရခိုင် က မွတ်ကုလားအရေး ကို နိုင်အောင် ဖြေရှင်းပါလို့။ အဲဒီမီးပွား လေး သည်ဖက်ကို ကူးမယ်ဆိုတာ ကို အကြိမ်ကြိမ် သတိပေးခဲ့ပါတယ်။အခု လဲ ဗမာ အစိုးရက မွတ်ကုလားအရေးကို ငြိမ်အောင် ထိန်းသင့်ပါတယ် ။ စစ်တပ်ကြီး တစ်ခု လုံး ရှိပါရက်နဲ့ အဲဒါလေးကို မနိုင်ရင် ရှက်စရာဂောာင်းပါတယ်။ မိတ္တိလာအရေး ကလည်း ကုလားဖက်က စပြီး မှားတာပါ ။ နေရာတိုင်းမှာ ကုလားဖက်က စပြီးမှားနေပါတယ် ။ အဲဒါ ကို ထောက်ပြီ မွတ်ကုလားတွေ ဘယ်လောက် ခွေးဝါးဝနေတယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာအာဏာပိုင်များက မွတ်ကုလားတွေဖက်က ရပ်တည်တာ များလာတော့ သာမာန်ပြည်သူလူထု ကို ဂရုမစိုက်တော့တဲ့ သဘောပါ။ အဂတိလိုက်စားတဲ့ မြန်မာအာဏာပိုင်များလာလေလေ မွတ်ကုလားတွေ ထောင်လေလေပါပဲ ။ အရင်ခောတ်က လို ခေါင်းမထောင်နိုင်အောင် နိမ်ထားရပါမယ် ။ မွတ်ကုလားရန် အရေး ကြီးနေပါသည် အစိုးရမင်းတို့။ ထပ်ဆင့် ကြိုတင်သတိပေးပါတယ်.မွတ်ကုလားများ ခေါင်းမထောင် နိုင်အောင် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ ဆောင်ရွက်ရပါမယ်။ အစိုးရအဖွဲ့ ၀င်တို့ကို ပြည်သူက အာဏာအပ်ထားတာ ပြည်သူပြည်သားများကို စောင့်ရှောက်ဖို့ပါ ။ အရေးအခင်းတွေမဖြစ်ဖို့ပါ။ မိမိတို့ တာဝန်ကို သိပါ။ နိုင်ငံတော် က ပေးတဲ့ ပြည်သူဘဏ္ဍာကို စားနေသူများဖြစ်တယ် ဆိုတာသတိရပါ။ အထူးသဖြင် ဗမာတွေ က ထမင်းကျွေးနေတယ်ဆို တာ အစဉ် သတိရပါ။
မြန်မာပြည်ကြီးမှာပြဿနာတွေဖြစ်လာခဲ့ရင် အမေစု၊ ၈၈၊ မင်းကိုနိုင်နဲ့ ဆရာတော်တွေပဲလိုက်ရှင်းနေတာတွေ့ ရတယ်
ကြံ့ဖွတ်နဲ့ ဝန်ကြီးတွေ အရာရှိအရာခံတွေ ဘယ်ရောက်နေကြလဲ သေကုန်ကြပြီလားဆိုတာ သိပါရစေ၊
မိထ္ထိလာ ပြဿနာ က မဖြစ်သင့်ပဲ ကြီးထွားလာခဲ့တာပါ။ သာမာန် ရာဇ၀တ်မှုလေးပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ မွတ်ကုလားက အရင်စတာပါ။ အဲသလို ရန်စ ရဲ တာ အစိုးရ က သူတို့ဖက်က ရှိနေတယ် သေချာသိလို့ပါ။ ဒေသအာဏာပိုင် တွေ ထံ လာဘ်ထိုးပြီး အမှု ကို မကြီးအောင်လုပ်နိုင်တယ် သေချာသိလို့ပါ။ ဒါကြောင့် လုပ်ရဲတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ က ဒေ သအာဏာပိုင်တွေ ကုလားဖက်က ရပ်တည်နေမှန်းသိနေပါတယ်။ ဒါ ကြောင့် ဥပဒေလမ်းကြောင်းနဲ့ မဖြေရှင်းပဲ တုတ်တုတ်ချင်း ဓါးဓါးချင်းဖြေရှင်းကြရင် အခုလို ကြီးထွားလာတာပါ။ အဓိ က ပြဿနာ က အစိုးရက ဖန်တီးတာပါ။ ဆို လိုတာက အကျင့်ပျက်လာဘ်စားမှုကို သိပါရက်နဲ့ မသိချင်ယောင်ဆောင်တာပါ။ အဂတိလိုက်စားမှုအသေးလေး က အကြီးကြီးဖြစ်နေပါပြီ.။
မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့လို ချိနဲ့ တဲ့ ထောက်လှမ်းရေးစနစ် နဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် လာဘ်စားတဲ့ စနစ်မှာ လူထု အားလိုတယ် ။ လူထု ရဲ့ အင်အားနဲ့သာလျှင် အထွေထွေ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Posted by Wai Lin Aung at 4:04 AM
ဒေါ်တင်ဌေးဝင်း ၊ မှတ်ပုံတင် အမှတ်( ၁၂/ ဒဂတ (နိုင်) ၀၃၃၈၃၂၊
သိမ်းဆည်းခံ ဧက (၆၇) ဧက ၊ကွင်းအမှတ်(၄၄၉ ၊ ၄၄၇)ဇီးပင်ရိုးကွင်း
ကျမ မိသားစုပိုင်လယ်မြေများဖြစ်ပါတယ်။ ဦးမြသောင်း၊ ဒေါ်နီ၊ ကိုမြလွင် သုံးဦးနာမည်ပေါက်ပါတယ်။
၁၉၉၀ ခုနှစ်က သိမ်းတာပါ။ မည်သူက သိမ်းမှန်းမသိပါ။ မည်သူ့ကို မျှ အကြောင်းကြားခြင်းမရှိပဲ ၊လယ်မြေများကို လမ်းဖော်ပါတယ်။ရပ်ကွက်စီမံကိန်းလို့သိရပါတယ်။ အခု ကျမသီးစားချထားတဲမြေက ကျန်ရှိနေတဲ့ ၁၄ဧက ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်က အိမ်ယာစီမံကိန်းမအောင်မြင်တဲ့ နေရာပါ.။ တစ်နှစ်ကို ငါးသိန်း သီးစားခရခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ် မှာတော့ မရသေးပါ။ ဦးမိုးကျော် ကို သီးစားချထားတာပါ။ ဦးမိုးကျော် ကရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးနဲ့ပေါင်းပြီး စိုက်ပျိုးမြေ တွေကို တူးဖော် ဖျက်ဆီးရောင်းစားပါတယ်။ ကားတစ်စီးလျှင် ၃၈၀၀၀ ဟု သိရပါတယ်။ ကျမက အထက် အဖွဲ့စည်း အဆင့်ဆင့်ကို တိုင်ကြားပြီးဖြစ်ပါတယ်. ။ မည်သို့မျှမထူးခြားပါ။ အခု လယ်ယာသမဂ္ဂကို တိုင်ကြားထားပါတယ်။ လယ်ယာသမဂ္ဂက ဦးစီးပြီး လယ်သမား များနဲ့ မြေတူးနေတာကို သွားရောက်တားဆီးခဲ့ပါတယ်။ ၃နာရီခန့် ရပ်ဆိုင်းသွားသော်လည် ယခု ဆက်လက်တူးဖော် နေဆဲပါ။ ကျမ လုံးဝမကျေနပ်ပါ။
Posted by Wai Lin Aung at 12:03 AM
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့  ၏ မလျော်သြဇာ အသုံးပြုခြင်း
လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခံရမူ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်
ရက်စွဲ ။ ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလ ( ၂၀ )ရက်
အကြောင်းအရာ။ ။ဘိုးဘွားမိဘလက်ထက်မှ လုပ်ကိုင်လာသည့် လယ်ယာမြေကို ဒဂုံမြိုသစ်(ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်) ဒုတိယမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုး ဦးမျိုးစိုးမိုး နှင့်၆၉ ရပ်ကွက်စာရေးမျိုးမျိးအောင်တို့မှ မတရားဝင်ရောက်မြေတူးရောင်းချခြင်းကိစ္စ။
အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်စပ်လျှင်း၍ ၁ဂ၊ ၊၃၊ ၂၀၁၃ရက်နေ့ ၈၉ရပ်ကွက် ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ကျွန်မဒေါ်တင်ဌေးဝင်းနှင်အစ်ကိုဦးမြလွင်ပိုင်ဆိုင်သော ကွင်းအမှတ်(၄၄၉)၊ ဦးပိုင်အမှတ်၁၃/၁ ကျီးပင်ရိုးကွင်း လယ်မြေများပေါ်တွင် မတရားကျူးကျော် ၀င်ရောက် မြေတူးမြေသယ် မြေရောင်းစားသည်ကို ဒဂုံဆိပ်ကမ်း မြို့နယ် လယ်သမားသမဂ္ဂ ကို (၁၅၊၃၊၂၀၁၃)ရက်နေ့တွင် တိုင်ကြားခဲ့ပါသည်။ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် အထက်အဆင့်က
အရေးယူမူမရှိသဖြင့် ကျွန်မ ဒေါ်တင်ဌေးဝင်းနှင့်အတူ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း လယ်ယာမြေ သမဂ္ဂ အဖွဲ့တို့မှ လယ်သမားဦးရေ ၅၀ ခန့်ကိုဦးဆောင်လျက် နံနက် ၁၀ နာရီခန့် အချိန်တွင် သွားရောက်တားမြစ်ခဲ့ပါသည်။ မြေတူး မြေသယ် မြေရောင်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်နေသူများမှာ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပင် ဖြစ်ပါသည်။
(၆၉) ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှုးရုံး ဥက္ကဌ ဦးတင်မောင်ဝင်း နှင့် ဦးကျော်မြင့် (ရာအိမ်မှုး) တို့သည် ဆယ်အိမ်မှုးများဖြစ်ကြသော ဦးစိန်အေး (ဆံရှည်)၊ ဦးမိုးကျော် တို့သည်
ယခု မြေတူးမည့် နေရာ အနီးတွင် နေထိုင်ကြသော ရပ်ကွက်နေပြည်သူတို့အား သောက်သုံရေကန် တူးမည်ဖြစ်ကြောင်း လွန်ခဲ့သော တစ်လခန့်က အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုအပြင် ရပ်ကွက်နေပြည်သူတို့အား ရေကန်တူးရာတွင်ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းလက်မှတ်ရေး
ထိုးစေခဲ့ပါသည်။အမှန်မှာ ၆၉ ရပ်ကွက် တွင် အိမ်တိုင်းနီပါး တုံကင် ကိုအသုံးပြု လျက် ချိုးရေ သုံးရေ လုံလောက်လျက်ရှိပါသည်။ တနည်းဆိုရသော် စီးပွားရေးသမားများနှင့် အုပ်ချုပ်သူ တို့ပူးပေါင်း ပရိယာယ်ဆင်ကာ မြေကိုရောင်းချနိုင်စေရေးအတွက် လုံလောက်သောအကြောင်းပြမှုကို ပြသရန် ကြိုတင်ဆောက်ရွက်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
ထိုအပြင် ရပ်ကွက်နေပြည်သူတို့ ၏ ရိုးအမှု ကို အခြေပြုလျက် မလိုအပ်သော ကန်ကို တူးရန် အကြောင်းရှာ ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုပြင် ရိုးသားသောရပ်ကွက်နေပြည်သူတို့အားအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုအသုံးပြုလျက် မလျော် သြဇာကို အသုံးပြုကာ လက်မှတ်ရေးထိုးစေခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
သိုပါ၍ ယခုဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်နေကြသူ အားလုံးနှင့် အဂတိလိုက်စားသော အုပ်ချုပ်သူ အာဏာပိုင်များကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူပေးရန်နှင့် မြေတူးခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းပေးရန် အသနားခံတင်ပြလိုက်ပါသည်။
မှတ်ပုံတင်အမှတ်(၁၂/လကန(နိုင်)၀၃၃၈၅၂)	အမှတ်(၆၁၂)အင်ကြင်းလမ်း၊ (၈၉)ရပ်ကွက်၊
ဦးကျော်မြင့်(လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခံရမူ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်)
ဦးအောင်သိန်းလင်း(လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခံရမူ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်)
ဦးခိုင်မောင်ရည်(လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခံရမူ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်)
ဦးအောင်ဇင်(လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခံရမူ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်)
ဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည်(လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခံရမူ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်)
လယ်မြေပိုင် ရှင် ဒေါ်တင်ဌေးဝင်း
၁ဂ၊ ၊၃၊၂၀၁၃ရက်နေ့ ၈၉ရပ်ကွက် ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ လယ်ပိုင်ရှင် ဒေါ်တင်ဌေးဝင်း ၏လယ်မြေများကိုမတရားကျူကျော် ၀င်ရောက် မြေတူးမြေသယ် မြေရောင်းစားသည်ကို လယ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူမှ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း မြို့နယ် လယ်သမားသမဂ္ဂ ကို တိုင်ကြားခဲ့ပါသည်၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် အထက်အဆင့် အဖွဲ့ အသီးသီးကို တိုင်ကြားခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါသည်။ အထက်အဖွဲ့ အစည်းအဆင့်ဆင် အရေးယူမူမရှိသဖြင့် လယ်ပိုင်ရှင် ဒေါ်တင်ဌေးဝင်း နှင့် ဒဂုံဆိပ်ကမ်း လယ်ယာမြေ သမဂ္ဂ အဖွဲ့တို့မှ လယ်သမားဦးရေ ၅၀ ခန့်ကိုဦးဆောင်လျက် နံနက် ၁၀ နာရီခန့် အချိန်တွင် သွားရောက်တားမြစ်ခဲ့ပါသည်။ မြေတူး မြေသယ် မြေရောင်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်နေသူများမှာ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပင် ဖြစ်ပါသည်။ (၆၉) ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှုးရုံး ဥက္ကဌ ဦးတင်မောင်ဝင်း နှင့် ဦးကျော်မြင့် (ရာအိမ်မှု) တို့သည့် ဆယ်အိမ်မှုးများဖြစ်ကြသော ဦးစိန်အေး (ဆံရှည်၊ ဦးမိုးကျော် တို့နှင့်အတူလွန်ခဲ့သော တစ်လခန့်က
ယခု မြေတူးမည့် နေရာ အနီးတွင် နေထိုင်ကြသော ရပ်ကွက်နေပြည်သူတို့အား သောက်သုံရေကန် တူးမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုအပြင် ရပ်ကွက်နေပြည်သူတို့အား ရေကန်တူးရာတွင် ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးစေခဲ့ပါသည်။
အမှန်မှာ ၆၉ ရပ်ကွက် တွင် အိမ်တိုင်းနီပါး တုံကင် ကိုအသုံးပြု လျက် ချိုးရေ သုံးရေ လုံလောက်လျက်ရှိပါသည်။
ရက်ကွက်နေပြည်သူတို့ ၏ ရိုးအ မှုကို အခြေပြုလျက် မလိုအပ်သော ကန်ကို တူးရန် အကြောင်းရှာ ဂွင်ဖန်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ တနည်းဆိုသော် ရိုးသားသော ရပ်ကွက်နေပြည်သူတို့အား အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို အသုံးပြုလျက် မလျော် သြဇာကို အသုံးပြုကာ လက်မှတ်ရေးထိုးစေခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
ယခုမြေတူးသည့် နေ့ရာသည် ယခင် အစိုးရလက်ထက်က သိမ်းဆည်းထားသော မြေယာဖြစ်သော်လည်း အိမ်ယာ စီမံကိန်း မလုပ် နိုင်သောကြောင့် လယ်ပိုင်ရှင် မှ ဦးမိုးကျော်ဆိုသူ ကို တစ်နှစ်လျှင် ငါးသိန်း နှုံးဖြင် အဌားချ (သီးစားချ) ထားသော မြေနေရာဖြစ်ပါသည်။ ယခုနှစ်တွင် ဦးမိုးကျေုာ်မှ ပဲတီစိမ်းကို စိုက်ပျိုးထားပါသည်။
အငှားချထားခြင်းခံရသော ဦးမိုးကျော်နှင့် (၆၉) ရက်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့  ပေါင်းစည်းမိသော အခါ ယခုကဲ့သို့ လယ်ယာမြေကို ဖျက်ဆီး ပြီး၊မြေတူးမြေရောင်း ဖြစ်စဉ် ကြီး ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါသည်။
မြေကားတစ်စီး၏ပေါက်ဈေးမှာ ကားကြီး ၃၈၀၀၀ ကျပ်၊ ကားလတ် ၃၂၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည်။
လယ်ပိုင်ရှင် မှ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်သဖြင့် တောင်သူလယ်သမား နှင့် ဒဂုံ ဆိပ်ကမ်း မြို့နယ်လယ်ယာမြေအလုပ်သမားအစည်းအရုံး သမဂ္ဂ ထံ တိုင်ကြားလာသဖြင့် ယခုကဲ့ သို့ ဖြစ်စဉ် ကြီးပေါ်ပေါက်လာခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ မြေကို တူးနေသော ယန္တယားကြီးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ ဟု ရေးထိုးထားသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြေတူးနေသော ယန္တရာ ကိုမောင်နှင်နေသူများကို လယ်သမားသမဂ္ဂမှ ၁၈.၃ ၂၀၁၃ နံနက် ၁၀နာရီခန့်တွင် သွားရောက်တားဆီးခဲ့ရာ အဆိုပါ မြေတူးယာဉ် မြေသယ်ယာဉ်တို့ မှာ သုံးနာရီခန့် ရပ်တန့်သွားခဲ့ပါသည်။ နေ့လည့် ၁ နာရီ ခန့်တွင် မြေများကို ပြန်တူးဖော်ပါသည်။ ယခုအချိန်အထိ ဆက်လက် တူးဖော်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ကို ပြင်ချင်သလောက်ပြင်ပါ။ မည်သို့မျှ မထူးခြားပါပေ။ မည်မျှပင်ပြင်စေကာမူမြန်မာ နိုင်ငံတွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရန် ဖြစ်နိင်ပါ့မလားဟူ၍ သံသယဖြစ်မိပါသည်။ အမှန်ဆိုရသော် လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါချေ။ သာမာန်ပြည်သူလူထု တို့သည် ဥပဒေပြင်ပတွင်နေထိုင်ခြင်း သို့ ရာဇ၀တ်မှု ပြုလုပ်ခြင်းကို အလွန်ကြောင့်ရွံကြပါသည်။ မလွဲသာလွန်း၍သာ ရာဇ၀တ်မှုများကျုးလွန်လေ့ရှိကြပါသည်။ စားစရာ မရှိ၍သော်လည်းကောင်း ၊ဒေါသကြောင့် သော်လည်ကောင်း ရာဂကြောင်းသော်လည်းကောင်း စိတ်အလိုကိုလိုက် ၍ ရာဇ၀တ်မှု ကျုးလွန်ခြင်းသည် အလွန်နည်းပါးလှပေသည်။ နေ့စဉ်နှင့်အမျှတွေ့ကြုံနေရသည်မှာ ငွေကြေးချမ်းသာသူနှင့် အာဏာကိုပိုင်စိုးထားသူတို့ ပူပေါင်းကာ ကျုးလွန်နေသော အမှုတို့မှာ နိုင်ငံနှင့် တစ်ဝှန်း ရေတွက်သော် ကုန်နိုင်ဖွယ်ဖြစ်၏။ ထိုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရန် အလွန်ကြိုးစားရပါဦးမည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် တရားဥပဒေ ကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြကာ ဖောက်ဖျက်နိုင်သူတို့မှာ တခြားသူများ မဟုတ်ကြပါချေ။ ပြည်သူလူထု ကခန့်အပ်ထားသော ပြည်သူ့ ၀န်ထမ်းများဖြစ် သည့် အာဏာပိုင် တစ်စု ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အာဏာရှိသော အာဏာပိုင်တို့နှင့် ပေါင်း၍ ငွေရှင်ကြေးရှင်တစ်စု မှာ လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ ကာ ပြည်သူကို နိပ်စက်နိုင်ခွင့် ရရှိထားပါသည်။ ဥပဒေ ကို လက်တစ်လုံးခြားလုပ်သူ အာဏာပိုင်နှင့် ငွေရှင်ကြေးရှင်တို့သည် ၄င်းတို့ ကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခွင့် မရှိအောင် အောက်လမ်းနည်းများသုံး`၍ အသင့်ပြင်ထားကြလေသည်။ တနည်းဆိုသော် ထွက်ပေါက်ကို ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားလေ့ရှိကြသည် အာဏာရှိသူနှင့် ငွေရှိသူတို့ ပေါင်းကာ ဆင်းရဲနွမ်းပါး သူ ပြည်သူနှင့် အသိအမြင်နည်းပါးသူ ပြည်သူတို့အပေါ် လူဝါးဝကာ ကိုယ်ကျိုးရှာနေသည်ကို နေရာအနှံ နိုင်ငံ တစ်ဝှန်းတွေ့နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရန် မှာ အိမ်မက်တွင် မြင်မက်ရုံ မျှသာ ဖြစ်ပါသည်ဟူလို။ အနောက်က နေထွက်သည်မှာ ဖြစ်နိုင်သေးသည် ။မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရန် လုပ်ဆောင်ခြင်းမှာ အနောက်ကနေထွက်သည်ထက် ဖြစ်နိုင်ချေ ပို ၍နည်လှပါသည်ဟု ဆိုချင်ပါတော့သည်။
Posted by Wai Lin Aung at 6:07 PM
မလျော် သြဇာ သုံးစွဲ ခြင်းနှင့် နောက်ပိုင်းပြဿနာများ
မြေတူးမြေရောင်းဖြစ်စဉ်တွင် အဓီကနေရာ၌ ပါဝင်လှုပ်ရှားနေသူ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးရုံးစာရေး မျိုးမျိုးအောင်ဖြစ်ပါသည်။ မြေစာရင်း နှင့်ကားဝင် ကားထွက် စာရင်းကို မှတ်တမ်းတင်နေရသည့် သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ (၆၉) ရပ်ကွက် ဥက္ကဌ ဦတင်မောင် ၀င်း၏ ခိုင်းစေမှု အရ
(၆၉) ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှုးရုံး ဥက္ကဌ ဦးတင်မောင်ဝင်း နှင့် ဦးကျော်မြင့် (ရာအိမ်မှု) တို့သည့် ဆယ်အိမ်မှုးများဖြစ်ကြသော ဦးစိန်အေး (ဆံရှည်၊ ဦးမိုးကျော် တို့နှင့်အတူလွန်ခဲ့သော တစ်လခန့်က
အမှန်မှာ ၆၉ ရပ်ကွက် တွင် အိမ်တိုင်းနီပါး တုံကင် ကိုအသုံးပြု လျက် ချိုးရေ သုံးရေ လုံလောက်လျက်ရှိပါသည်။ မည်သူမဆို လာရောက်စစ်ဆေးကြည့်လျှင် အလွယ်တကူ သိနိုင်ပါသည်။
လယ်ပိုင်ရှင် မှ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်သဖြင့် တောင်သူလယ်သမား နှင့် ဒဂုံ ဆိပ်ကမ်း မြို့နယ်လယ်ယာမြေအလုပ်သမားအစည်းအရုံး သမဂ္ဂ ထံ တိုင်ကြားလာသဖြင့် ယခုကဲ့ သို့ ဖြစ်စဉ် ကြီးပေါ်ပေါက်လာခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ မြေကို တူးနေသော ယန္တယားကြီးတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ ဟု ရေးထိုးထားသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြေတူးနေသော ယန္တရာ ကိုမောင်နှင်နေသူများကို လယ်သမားသမဂ္ဂမှ ၁၈.၃ ၂၀၁၃ နံနက် ၁၀နာရီခန့်တွင် သွားရောက်တားဆီးခဲ့ရာ အဆိုပါ မြေတူးယာဉ် မြေသယ်ယာဉ်တို့ မှာ သုံးနာရီခန့် ရပ်တန့်သွားခဲ့ပါသည်။ သို့သော် နေ့လည် ၁ နာရီခန့်တွင် ကန်ဘောင် တူးနေယောင် ပြန်တူးကာ မြေသယ်ယာဉ်များဖြင့် ပြန်လည် သယ်ယူ နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ကို ပြင်ချင်သလောက်ပြင်ပါ။ မည်သို့မျှ မထူးခြားပါပေ။ မည်မျှပင်ပြင်စေကာမူမြန်မာ နိုင်ငံတွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရန် ဖြစ်နိင်ပါ့မလားဟူ၍ သံသယဖြစ်မိပါသည်။ အမှန်ဆိုရသော် လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါချေ။ သာမာန်ပြည်သူလူထု တို့သည် ဥပဒေပြင်ပတွင်နေထိုင်ခြင်း သို့ ရာဇ၀တ်မှု ပြုလုပ်ခြင်းကို အလွန်ကြောင့်ရွံကြပါသည်။ မလွဲသာလွန်း၍သာ ရာဇ၀တ်မှုများကျုးလွန်လေ့ရှိကြပါသည်။ စားစရာ မရှိ၍သော်လည်းကောင်း ၊ဒေါသကြောင့် သော်လည်ကောင်း ရာဂကြောင်းသော်လည်းကောင်း စိတ်အလိုကိုလိုက် ၍ ရာဇ၀တ်မှု ကျုးလွန်ခြင်းသည် အလွန်နည်းပါးလှပေသည်။ နေစဉ်နှင့်အမျှတွေ့ကြုံနေရသည်မှာ ငွေကြေးချမ်းသာသူနှင့် အာဏာကိုပိုင်စိုးထားသူတို့ ပူပေါင်းကာ ကျုးလွန်နေသော အမှုတို့မှာ နိုင်ငံနှင့် တစ်ဝှန်း ရေတွက်သော် ကုန်နိုင်ဖွယ်ဖြစ်၏။ ထိုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရန် အလွန်ကြိုးစားရပါဦးမည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် တရားဥပဒေ ကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြကာ ဖောက်ဖျက်နိုင်သူတို့မှာ တခြားသူများ မဟုတ်ကြပါချေ။ ပြည်သူလူထု ကခန့်အပ်ထားသော ပြည်သူ့ ၀န်ထမ်းများဖြစ် သည့် အာဏာပိုင် တစ်စု ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အာဏာရှိသော အာဏာပိုင်တို့နှင့် ပေါင်း၍ ငွေရှင်ကြေးရှင်တစ်စု မှာ လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ ကာ ပြည်သူကို နိပ်စက်နိုင်ခွင့် ရရှိထားပါသည်။ ဥပဒေ ကို လက်တစ်လုံးခြားလုပ်သူ အာဏာပိုင်နှင့် ငွေရှင်ကြေးရှင်တို့သည် ၄င်းတို့ ကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခွင့် မရှိအောင် အောက်လမ်းနည်းများသုံး`၍ အသင့်ပြင်ထားကြလေသည်။ တနည်းဆိုသော် ထွက်ပေါက်ကို ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားလေ့ရှိကြသည် အာဏာရှိသူနှင့် ငွေရှိသူတို့ ပေါင်းကာ ဆင်းရဲနွမ်းပါး သူ ပြည်သူနှင့် အသိအမြင်နည်းပါးသူ ပြည်သူတို့အပေါ် လူဝါးဝကာ ကိုယ်ကျိုးရှာနေသည်ကို နေရာအနှံ နိုင်ငံ တစ်ဝှန်းတွေ့နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရန် မှာ အိမ်မက်တွင် မြင်မက်ရုံ မျှသာ ဖြစ်ပါသည်ဟူလို။ အနောက်က နေထွက်သည်မှာ ဖြစ်နိုင်သေးသည် ။မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရန် လုပ်ဆောင်ခြင်းမှာ အနောက်ကနေထွက်သည်ထက် ဖြစ်နိုင်ချေ ပို ၍နည်လှပါသည်ဟု ဆိုချင်ပါတော့သည်။
Posted by wai lin aung at 9:18 AM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Fac
Posted by Wai Lin Aung at 9:21 AM
ငါ့ရဲ့ ခေါင်းကို တအားလွဲ ရိုက်ရဲလား
လူရွှင် တော် တစ်ဦးက ပြောပါသည်။
နောက်တစ်ဦးက ရိုက်ရဲသည် ဟုဆိုကာ ရိုက်ရန်ပြင်ပါသည်။
ဟေ့ ကောင် မင်းရိုက်တာ ဒဲ့ ဖြစ်နေတယ်။ တည့်တည့် ဖြစ်နေသည်။ ငါက ခေါင်းကို လွှဲ ရိုက်ခိုင်းပါသည်ဟု ဆိုလေသည်။ (တည့်တည့်ရိုက်ခိုင်း သည်မဟုတ်၊ ခေါင်းကို လွဲချော်ကာ ရိုက်ခိုင်းပါသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဥာဏ်ကောင်းပေစွ ။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးသမားများနှင့် အာဏာပိုင်တစ်ချို့သည် ထိုကဲ့သို့ ကျွမ်းကျင်ကြပေသည်။
မင်းက အကောင်ကြီးသည် နှစ်ခါပြန်လျောက် ဟုဆိုကာ။
Posted by Wai Lin Aung at 9:18 AM
၁၈.၃.၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ ပိုင်းယန္တယားစက်များဖြင့် မြေကြီးများကို သယ်ပို့ရောင်းချနေသဖြင့် ဒဂုံဆိပ်ကမ်း လယ်သမားသမဂ္ဂ အဖွဲ့ မှ သွားရောက် တားဆီးခဲ့ပါသည် ။ သို့ရာတွင် မြေသယ်စက်ကြီးများဖြင့် ဆက်လက် တူးဖော်နေသည် ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ မူလလယ်ပိုင်ရှင် ၏ ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ မူလ လယ်ပိုင်ရှင် က ကျေနပ်မူ မရှိပါသဖြင့် ဒဂုံဆိပ်ကမ်း လယ်သမားသမဂ္ဂ အဖွဲ့  ကို တိုင်ကြားခဲ့ပါသည်။
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း လယ်သမားသမဂ္ဂ အဖွဲ့  ထံ နောက်ထပ် တိုင်ကြားသော တိုင်စာမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့ နယ်
ယခင်သိမ်ကျောင်း ဆင်ခြေရာ ကျီစုရှေ့-နောက် -ရွာဟောင်း
အကြောင်းအရာ။ ။ 69 ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ -ပဲတီစိမ်း စိုက်ထားသော လယ်မြေကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ
အဖွဲ့ ဟုစာရေးသားထားသည့် စက်ကြီးများဖြင့် လာရောက်တူးဖော်နေသည့်ကိစ္စ။
ကန်တူးပြီး မြေများကို ဆယ်ဘီးကားကြီး 10စီး ကျော်ဖြင့်82ရပ်ကွက် 69ရပ်ကွက် 68ရပ်ကွက် ပုဂံလမ်း
မြနန္ဒာ လမ်းတို့တွင် ခေါက်ခေါက်ခါခါ မြေကြီးသယ်ပြီး သွားနေပါသည်။ နှိုင်ငံတော်ပိုင်လမ်းဖြစ်ပြီး ဘုန်းကြီး -သီလရှင် နှင့် -ရပ်ကွက်နေပြည်သူများက ပြန်လည် မွန်မံပြုပြင်မွန်းမံထားပါသည် လမ်းများပျက်စီးခြင်း ဖုန်မှုန့် များလွင့်ခြင်းကြောင့်
ရပ်ကွက်နေ ပြည်သူလူထုနှင့် လယ်သမားများ ကျမ်းမာရေးထိခိုက်ပါသဖြင့် အရေးယူပေးပါရန် တိုင်ကြားအပ်ပါသည်….။
1 ။ကိုဝင်းဇော်(ခ)ကိုဦး- (82ရပ်ကွက် အမှတ် 750 ဆယ်အိမ်မှူး)……………………….
2။ကိုမြဌေး - ………………………. 3။ဦးသန်းညွန့် -………………………
6။ဦးကျင်အုန်း- ……………………. 7။ကိုအုံးခိုင်-……………………………
8။ဇော်သန်း - ……………………… 9။ကိုတင်ရွှေ- …………………………
10။ကိုထိန်ဝင်း- …………………… 11။ကိုတင်လှိုင်-………………………...
12။ကိုငွေကြည်- ……………………… 13။ကိုကျော်ကြီး-
တိုင်ကြားသူ များစာရင်း နှင့် လက်မှတ်များကို ဒဂုံ ဆိပ်ကမ်း လယ်သမားသမဂ္ဂ္ဂ ရုံးအဖွဲ့ တွင် လက်ခံသိမ်းဆည်းထားပါသည်။
အဓမ္မ ကျူးကျော် ၀င်ရောက်မြေတူးနေသူများအား ဒဂုံဆိပ်ကမ်း လယ်သမားသမဂ္ဂမှ သွားရောက်တားမြစ်ပုံ
အထက်ပါဖြစ်ရပ်ကို သတင်းအဖြစ် တင်ပြအပ်ပါသည်။
Posted by Wai Lin Aung at 2:39 AM
Posted by Wai Lin Aung at 5:33 PM
http://www.president-office.gov.mm/ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး ၀က်ဆိုက်
http://www.ministryofinformation.gov.mm/index.php ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၀က်ဆိုက်
http://moemaka.blogspot.com/2013/03/maung-khin-min-da-nu-phyu-articles.html?spref=fb မိုးမခ မီဒီယာ
http://www.mora.gov.mm/ သာသာနာရေး ၀န်ကြီဌာန
http://www.mpt.net.mm/ ဆက်သွယ်ရေး စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်း ၀န်ကြီးဌာန
http://www.commerce.gov.mm/ စီးပွားရေး နှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန
http://maruthura.blogspot.com/2013/03/blog-post_31 ဘလော့ တွင် ၀န်ကြီးဌာန ၀က်ဆိုက် များရှိသည်။
http://maruthura.blogspot.com/2013/03/blog-post_311.html မြန်မာ သတင်းဌာနများရှိသည်။
http://www.readymyanmar.com/ create your web site 1 year freely
Washington, D.C. · http://www.washingtonpost.com/ ၀ါရှင်တန်ပိုစ်
ပြည်ပရောက် မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့
http://myanmarblogdirectory.blogspot.com/ ( မြန်မာဘလော့ ဒိုင်ယာယီ)
http://mmblogdirectory.blogspot.com/ ( မြန်မာ ဘလော့ ဒိုင်ယာယီ ၂)
http://www.venkawwida.info/ (ဦးကောဝိဒ- မြိတ်)
http://lanka-msma.blogspot.com/ (သီရိလင်္ကာရောက်မြန်မာ ရဟန်းတော်များ)
http://ashinmettacara.blogspot.com/ ( အရှင်ေ မတ္တာစာရ)
http://khitpyaing.blogspot.com/ ( ခေတ်ပြိုင်)
http://komoethee.blogspot.com/ (ကိုမိုးသီးဇွန် )
http://ko-htike.blogspot.com/ (ကိုထိုက် ဘလော့)
http://blogger.burmatodaymedia.com/ (ယနေ့ မြန်မာ)
http://chittemanawmyae.blogspot.com/ (ချစ်တဲ့ မနောမြေ-)--ကာတွန်း-သားငယ် အမေရိကန်
http://fine-leaves.blogspot.com/ (ရွက်မွန် )
http://7monkeys.blogspot.com/ ( မျောက် ၇ ကောင်)
http://kadaung.blogspot.com/ ( ကဒေါင်း- ညင်သာ)
http://weunite-weblog.blogspot.com/ (သမိုင်းထဲက ရက်စွဲများ )
http://bigbbrown.blogspot.com/ (မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးသတင်း)
http://zarganar-windoor.blogspot.com/ ( ဇာဂနာ)
http://www.oway8888.blogspot.com/ (အိုးဝေ- ၈၈၈၈)
http://www.abepexile.org/ ( မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့)
http://longwalktofreedomofburma.blogspot.com/ ( ဇော်-ဘားမား)
http://aragonjune.blogspot.com/ (မစ္စတာ ဘောက်ခ်စ်)
http://deedoke.blogspot.com/ ( ဒီးဒုတ်)
http://cozan.blogspot.com/ (ကိုဇန် )
http://ashinkumara.blogspot.com/ (အရှင်ကုမာရ )
http://www.newsnow.co.uk/newsfeed/?name=Myanmar (နအဖ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး)
http://didfortwayne.blogspot.com/ (ဒီမိုကရက်တစ် သတင်း)
http://freedomuprising.blogspot.com/ (ဖရီးဒမ်း အပ်ရိုက်ဇင်း)
http://generation96.blogspot.com/ ( ၉၆ မျိုးဆက်သစ် )
 Myanmar Bloggers
 8888 New Generations
 ဓမ္မနဲ့ အဓမ္မ
 Freedom News Group
 သိင်္ဂီနွယ်ရဲ့ မှတ်စုစာအုပ်
 တုတ်ကြီး (ခေတ္တတာဝတိံသာ)
 အတွေးများ၊ ရင်ခုန်သံများ
 အညာနွေ တမာမြေ
 ဖြိုးဝေ mmp
 Berumar's Weblog
 Ultimate Fighters
 MM Thinker
http://dannai.civiblog.org/ (င်္ဒမိုကရေစီနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး အင်အားစု)
http://www.myitzuri.com/ (ဘားမားတူဒေး မီဒီယာ )
http://burmanieuws.blogspot.com/ (ဘားမား နယူးစ်)
http://minyekyawswar.blogspot.com/ ( မင်းရဲကျော်စွာ)
http://drivingforburma.blogspot.com/ (မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီဆော်ဆောင်ရေး)
http://mmedwatch.blogspot.com/ (ဖွံဖြိုးမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး)
http://s0wha1.blogspot.com/2007/10/blog-post_29.html (ကာရံမဲ့ အတွေးစများ)
http://thadar.blogspot.com/ (မသဒ္ဒါ ဘလော့)
http://mabayda.blogspot.com/ ( မဗေဒါ)
http://s0wha1.blogspot.com/ (စိုးဝှက်- အတွေးစများ)
http://nyein-chan-aung.blogspot.com/ (ငြိမ်းချမ်းအောင် )
http://linletkyalsin.blogspot.com/ (လင်းလက် ကြယ်စင် )
http://yaw-han-aung.blogspot.com/ (ကိုယောဟန်အောင် )
http://pu-htu-zin.blogspot.com/ (ပုထုဇဉ် )
http://ainmetdiary.blogspot.com/ (အိပ်မက် ဒိုင်ယာယီ )
http://mrbalance.blogspot.com/ ( မစ္စတာ ဘဲလင့်စ်)
http://www.maungdai.blogspot.com/ ( မောင်ဒိုင်း)
http://beyond-rangoon.blogspot.com/ (ရန်ကုန် နောက်ဘက်မှာ)
http://burmanewsandarticles.blogspot.com/ (မြန်မာ အွန်လိုင်း)
http://burmasitmone.wordpress.com/ (ဗမာ စစ်မုန်း)
http://komg.blogspot.com/ (ကိုမောင် )
http://maydar-wii.blogspot.com/ (မေဓာဝီ )
http://myochitmyanmar.blogspot.com/ (မျိုးချစ် မြန်မာ)
http://heinnge.blogspot.com/ (နှင်းငယ် )
http://hteinkmin.blogspot.com/ (ထိုက်မင်း )
http://khinminzaw.blogspot.com/ (ခင်မင်းဇော် )
http://kyawhtet.blogspot.com/ (ကျော်ထက် အိမ်မက်များ)
http://cittasukha.blogspot.com/ (စိတ္တသုခ ပရဟိတ လူငယ်)
အထွေထွေ ဖတ်ချင်ချင်စရာ ဘလော့များ
http://engineersformyanmar.blogspot.com/ (မြန်မာပြည်အတွက် အင်ဂျင်နီယာများ)
http://nykomme.blogspot.com/ ( ကိုဝေလင်း- နှင်းခါးမိုး )
http://graceswezinhtaik.blogspot.com/ (ဂရေ့ ဆွေဇင်ထိုက်)
http://sisain.blogspot.com/ (ကိုစစ်အိမ် )
http://www.pandora-pandorabox.blogspot.com/ (နတ်သမီးလေးရဲ့ ပုံပြင် )
http://www.pandora-pandorabox.blogspot.com/ (ပန်ဒိုရာ )
http://kojud.myanmarbloggers.org/ (ကိုဂျက်ရဲ့  အတွေး)
http://myalwar.blogspot.com/ ( မြလွှာ)
http://mmposts.blogspot.com/ (မြန်မာပို့ စ် )
http://red-rose-dream.blogspot.com/ (နှင်းဆီနီ )
http://yadanarcho.blogspot.com/ (ရတနာချို )
http://mhanhlainenge.blogspot.com/ (မာန်လှိုင်းငယ် )
http://aclmdy.blogspot.com/ ( မိုးကုတ်သား)
http://soehtet.blogspot.com/ (စိုးထက်- မဲလ်ဘုန်း )
http://abstractnight.blogspot.com/ (စိတ္တဇည- ဒိုင်ယာယီ)
http://khunzero.blogspot.com/ ( မိုင် ၀ီးကလီး)
http://saturngod.mysteryzillion.com/ ( ဘလော့ကာနဲ့  နည်းပညာအထွေထွေ)
http://usagi-cancer.blogspot.com/ (ယူဆဂီ )
http://thihakyawzaw.blogspot.com/ (သီဟ ကျော်ဇော)
http://sttw2201.blogspot.com/ (အက်စ်တီတီဒဗလျူ )
http://mrprogrammer.blogspot.com/ (မစ္စတာ ပရို ဂရမ်မာ)
http://myanmarculture.blogspot.com/ (မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု )
http://tesla.myanmarbloggers.org/ (သဲစ်လ- မြန်မာ)
http://dr-junior.blogspot.com/ (ဒေါက်တာ ၈ျူနီယာ)ဆေးပညာအကြောင်း
http://educationinmyanmar.blogspot.com/ (သက်တန့် ဖြူ )
http://kyalsinsoewin.blogspot.com/ (ကြယ်စင် စိုးဝင်း )
http://july-dream.blogspot.com/ (ဂျူလိုင်အိပ်မက် )
http://www.tekong.net/ (တီကောင် )
http://www.zinkolatt.net/ (ဇင်ကိုလတ် )
http://ainchannmyay.blogspot.com/ (အိမ်ခြမ်းမြေ့ )
http://181bayintnaung.blogspot.com/ ( ဘုရင့်နောင်)
http://ainmetdiary.blogspot.com/ (အိမ်မက် ဒိုင်ယာယီ )
http://angwei.blogspot.com/ ( အငွေ့ )
http://ebooks.mmblogs.net/ (ဘာအရေးအကြီးဆုံးလဲနှင့် မြန်မာ ၀တ္တျုများ)
http://myeiknews.blogspot.com/ (မြိတ်- ပုလဲမြေ- မြန်မာပြည်တွင်း)
http://mogokmedia.blogspot.com/ (မိုးကုတ် ရတနာမြေ- မြန်မာပြည်တွင်း)
http://awlanmg.blogspot.com/ (အတွေးနှင့် ခံစားမှု )
http://emotionalcorner.blogspot.com/ ( မမေ- ၁၁)
http://cittasukha.blogspot.com/ (စိတ္တသုခ ပရဟိတ လူငယ် )
http://blog.mghla.com/ (ကိုမောင်လှ ဒိုင်ယာယီ)
http://chaweimahn.blogspot.com/ (ချောအိမာန် )
http://komoeyay.blogspot.com/ (ကိုမိုးရေ-ကွန်ပြူတာ သုတ)
http://www.soezeya.blogspot.com/ (စိုးဇေယျာ )
http://www.zawmoeaung.blogspot.com/ (ဇော်မိုးအောင် )
http://bagannat.blogspot.com/ (ကျနော့် မိတ်ဆွေ)
http://shwemyat.blogspot.com/ (ရွှေ မြတ်)
http://blog.bo5.us/ (ဗိုလ်တထောင် အထက ၅)
http://www.boesein.com/ (ဘိုးစိန် )
http://chitthulaydreams.blogspot.com/ (ချစ်သူလေးရဲ့ အိပ်မက် )
http://sagaing.blogspot.com/ (စစ်ကိုင်း၏ မှတ်တမ်း)
http://cmsmdy.blogspot.com ( စီအမ်အက်စ် ဒိုင်ယာယီ)
http://dr-junior.blogspot.com/ (ဒေါက်တာ ၈ျူနီယာ)
http://emotionalcorner.blogspot.com/ (ခံစားမှု )
http://htethtetkhaing.blogspot.com/ (ထက်ထက်ခိုင် )
http://ilatphyu.blogspot.com/ (အိလတ်ဖြူ )
http://joyful4all.blogspot.com/ (ပျော်ရွှင်မှု )
http://julyhtet.blogspot.com/ (ဇူလိုင်ထက် )
http://justshareall.blogspot.com/ (ပိုင်သူချစ် )
http://khunmoung.blogspot.com/ (ခွန်မောင် )
http://kthwe.blogspot.com/ (ကေ -သွေး)
http://kyawswar.blogspot.com/ ( ကျော်စွာ)
http://kyellay.blogspot.com/ ( ကြယ်လေး)
http://mayvelous.com/ (မေဘယ်လ် လို့ စ်)
http://mgmyomin.blogspot.com/ (မောင်မျိုးမင်း- ခံစားမိသမျှ )
http://mgthantzin.blogspot.com/ ( မောင်သန့် ဇင်)
http://mgyoe.blogspot.com/ ( မောင်ရိုး- ပညာပေး)
http://minnyoonthit.myanmarbloggers.org/ ( မင်းယွန်းသစ် )
http://mmhan.blogspot.com/ ( အမ်အမ် ဟန်)
ကို http://www.wutyeefoodhouse.com/?p=5300%2F မှာရေးထားပါတယ် မုန့်လုပ်နည်း သင်္ကြန် မုန့်
Posted by Wai Lin Aung at 7:20 AM